ह्वात्तै घट्यो आज सुनचाँदीको मूल्य, यस्तो छ आजको भाउ -
Homeअर्थ/वाणिज्यह्वात्तै घट्यो आज सुनचाँदीको मूल्य, यस्तो छ आजको भाउ
नेपाली बजारमा साताको पहिलो दिन आज आइतबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। गतहप्ता केही उतावचाढाव देखिएको सुनको मूल्यमा यो साताको पहिलो दिनमै गिरावट आएको हो।
शनिबार प्रतितोला ५८ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज १ सय रुपैयाँले घटेर ५८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
त्यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ५७ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि पनि बढेको छ। आज चाँदी ७ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
यस्तो छ आजको भाउ !!
महाधिवेशन सुनिश्चितताको माग राख्दै नेविसंघ नेताहरु धर्नामा
आर्थिक परनिर्भरताका कारण महिला हिंसा :सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन
October 25, 2018 Spnews समाचार 0
आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य फेरी ह्वात्तै बढेको छ । हिजो प्रतितोला ६० हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज ३ सयले बढेर प्रतितोला ६० हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल […]
सुनको मूल्य घट्यो, यस्तो छ आजको भाउ !!
October 17, 2017 Spnews अर्थ/वाणिज्य, समाचार 0
काठमाडौं, ३१ असोज : असोज महिनाको अन्तिम दिन आज पनि सुनको मूल्य घटेको छ । पहेलो धातु अर्थात सुन आज प्रतितोला एक सय रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवासायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ५६ […]